Famolavolana tsindrona, Fitaovana bobongolo plastika, ampahany amin'ny famolavolana plastika - bobongolo Enuo
TSY MISY ATRAHARAHAN'NY PROJECT B2B NA B2C, MBA MBA HALALANA NY HEVITRAO
MIFANDRAY AMINA METY 21+ tAONA:
IRAY MIJANONANA TOTALAM-PAHAMARINANA VOLA PLASTIKA
-Nitranga fahiny VOKATRA
Manaova prototypes amin'ny fanontana 3D na CNC
Masinina voafaritra tsara hametahana ny metaly
Fitaovana fiomanana sy fandrefesana fandrefesana
Prototype / Famokarana plastika & famolavolana bobongolo maty
Famokarana plastika sy silika ary famonoana maty
MOMBA NY ENUO MOLD
Nahatratra ny fifindran-toerana vaovao ny orinasa tamin'ny aprily 2017, velaran-javamaniry zaridaina vaovao misy velaran-tany 2000 metatra toradroa, izay nofenoina milina fanodinana CNC mazava ho azy, milina famafazana EDM, milina fanodinana, milina fitotoana fitiliana, fitiliana ary fitaovana hafa mihoatra ny 30 set, koa vondrona fivorian'ny bobongolo telo no tafiditra ao. Ny lanjan'ny valizy amin'ny atrikasa 15 taonina, miaraka amin'ny seta 100 isan-taona, ary ny lanjan'ny bobongolo lehibe indrindra hatramin'ny 30 Tons.
Fifaninanana eo amin'ny tsena bobongolo, ny fifaninanana fototra ao amin'ny orinasa dia avy amin'ny ekipa mpamokatra injeniera sy mpanamboatra za-draharaha. Tetikasa, famolavolana ary fanamboarana mpikambana ao amin'ny fitantanana fototra dia samy manana traikefa asa azo tsapain-tanana ao amin'ny magazay miasa mandritra ny taona maro, ary manana traikefa fitantanana sampana mihoatra ny 10 taona, mahay tsara amin'ny fandrindrana ny loharanom-pahalalana hamahana ireo teboka roa fanaintainana lehibe momba ny fanaintainana- ny kalitao sy ny fetr'andro farany. Anisan'ireny, ny ekipa mpamolavola dia nandray anjara mivantana tamin'ny famolavolana bobongolo nataon'i Marelli AL / Magna / Valeo; Mahle-Behr fiara & fiara fitaterana fiara sy fizarana fihenam-bidy; Inalfa auto sunroof faritra; Fizarana kojakoja anatiny sy ivelany HCM; INTEC / ARMADA (Nissan) faritra fananganana fiara, ny faritra ao an-trano LEIFHEIT. Ny ekipan'ny tetikasa dia nitarika ny famolavolana bobongolo ny tobin'ny rivotra sy rano CK / Mahle-Behr / Valeo ary ny fantsom-pifamoivoizana Sogefi fidirana sy fantsona fantsona, Sinocene / Toyota synthetic interior and exterior parts, exterior fuel tank EATON, ABB appliances electronics switch and IKEA vokatra ao an-trano.
Ho fanampin'izany, ny orinasa dia namorona ny fifanarahana fampandrosoana miaraka amin'ireo mpikambana ao amin'ny vondrona BHD hafa, afaka manome serivisy mijanona iray miaraka amin'ny famolavolana bobongolo sy ny famokarana, ny famolavolana sy ny famokarana fitaovam-pitsaboana, ny tsindrona vokatra plastika, ny famafazana ary ny famoriana.